တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတုံ့ပြန်ချက် - အကျိုးကျေးဇူးဖောင်ဒေးရှင်း
Reward ဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့်လိင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများနှင့်အင်တာနက်အပြာစာပေများမှပြintroducedနာများအားပိုမိုသိရှိလာစေရန်ကူညီပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစိုးရနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်းများတွင်ပါ ၀ င်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည် ဤစာမျက်နှာကိုအစိုးရညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြခဲ့သည့်သတင်းများနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းကိုဖော်ပြထားသည်။
Reward ဖောင်ဒေးရှင်းမှကူညီနိုင်သည့်အခြားညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုများအကြောင်းသင်သိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ အီးမေးလ်က.
22 သြဂုတ်လ။ ယူကေအစိုးရ၏ပရောဂျက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်တစ်ခုဖန်တီးပါ အွန်လိုင်းထိခိုက်မှုဘီလ်Reward Foundation ကိုအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီကချဉ်းကပ်ခဲ့သည် လူထု အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရန် Taxonomy နှင့် Framework ကိုထိခိုက်စေသည် Online Safety Data Initiative အတွက် သူတို့အတွက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာမှာ PUBLIC ကိုကူညီခဲ့တယ် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ညမ်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူ
26 မတ်လ 2021 ။ Reward Foundation သည် UK Home Office ၏တုံ့ပြန်မှုကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည် အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုမဟာဗျူဟာအကြံပေးခြင်း ၂၀၂။ တုံ့ပြန်မှုကိုမှရရှိနိုင်ပါသည် ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ.
8 ဒီဇင်ဘာလ 2020 ။ Darryl Mead ကစကော့တလန်အစိုးရညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည် Equally Safe - ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းအတွက်အမျိုးသားများ၏လိုအပ်ချက်ကိုစိန်ခေါ်ရန်၊ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သောအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန်နှင့်အမျိုးသမီးများအားထွက်ခွာရန်ကူညီခြင်းအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း။ အားဖြည့်ပေးသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှုမှာစကော့တလန်ရှိ Nordic Model ကိုလက်ခံရန်ထောက်ခံခဲ့သည် Nordic Model ယခု!
22 ဇူလိုင်လ 2019 ။ NATSAL-4 စစ်တမ်းတွင်အသုံးပြုမည့်မေးခွန်းများကိုဆုံးဖြတ်ရန် TRF သည်ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ လိင်ဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်လူနေမှုပုံစံများဆိုင်ရာအမျိုးသားစစ်တမ်းကိုယူကေတွင် ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
28 ဇန်နဝါရီလ 2019 ။ Immersive and Addictive Technologies ၏ကြီးထွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ Commons Select Committee မှစုံစမ်းမေးမြန်းချက်အား Mary Sharpe မှအပြည့်အဝတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ဒီကိစ္စကိုဒစ်ဂျစ်တယ်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ မီဒီယာနှင့်အားကစားဌာနတို့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုမကြာမီယူကေပါလီမန်မှထုတ်ပြန်သင့်သည်။
16 ဇူလိုင်လ 2018 ။ စကော့တလန်၌အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများဆိုင်ရာ ၀ န်ကြီးချုပ်၏အမျိုးသားအကြံပေးကောင်စီသည်အမျိုးသမီးကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သတ်၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများကိုဖိတ်ကြားရန်အစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးကမ်းလှမ်းမှုမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးမှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းတို့၏ဆက်စပ်မှုများဖြစ်သည်။
6 ဒီဇင်ဘာလ 2017 ။ TRF သည်ယူကေ၏အင်တာနက်လုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာအစိမ်းရောင်စက္ကူတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ဒီဂျစ်တယ်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ မီဒီယာနှင့်အားကစားဌာနရှိအင်တာနက်လုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာအဖွဲ့သို့လည်းဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရန်အဆိုပြုလွှာတစ်ခုကိုလည်းတင်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနေအထားမှာယူကေအစိုးရသည်တရား ၀ င်မဟုတ်သောအရာများအားလုံးကိုအွန်လိုင်းတွင်တရားမ ၀ င်ဖြစ်စေရန်ကတိကဝတ်အတိုင်းလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ သော့ချက်ကျသောနယ်ပယ်များသည်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခွင့်ကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။
11 ဇွန်လ 2017 ။ Mary Sharpe သည်စကော့တလန်၏အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုတားဆီးကာကွယ်ရန်နှင့်တိုက်ဖျက်ရန်မဟာဗျူဟာကိုအကြံပေးမှုတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တုန့်ပြန်ချက်ကိုယင်း၏အပေါ်စကော့တလန်အစိုးရမှထုတ်ဝေခဲ့သည် က်ဘ်ဆိုက်.
ဧပြီလ 2017 ။ Reward Foundation သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်မစာမျက်နှာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည် ကလေးသူငယ်များနှင့်လူငယ်များအတွက်အင်တာနက်လုံခြုံရေးအတွက်အမျိုးသားလုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ် စကော့တလန်အစိုးရထုတ်ဝေသည်။
8 မတ်လ 2017 ။ လူငယ်များအပေါ်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကနေဒါပါလီမန်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို TRF မှစာဖြင့်ရေးသားတင်ပြခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာရရှိနိုင် အဂၤလိပ္ နှင့် ပြင်သစ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တင်ပြချက်အားဖြင့်ကိုးကားခဲ့သည် သဘောထားကွဲလွဲမှုအစီရင်ခံစာ ကော်မတီ၏ကွန်ဆာဗေးတစ်အဖွဲ့ဝင်များကပြင်ဆင်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 ။ စကော့တလန်အစိုးရသည်စကော့တလန်ကျောင်းများတွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်လိင်ပညာရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ပါတ်သက်၍ စာလုံးရေ ၁၀၀ ကိုဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ Reward Foundation ၏တင်ပြချက်သည်နံပါတ် ၃ ဖြစ်သည် ဒီမှာ.
11 ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 ။ Mary Scot နှင့် Darryl Mead တို့သည်စကော့တလန်လူငယ်များအပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏သက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သော Young Scot ရှိ 15Rights အစီအစဉ်မှလူငယ် ၁၅ ဦး အားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာသင်တန်းတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ ဤသည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖို့ ဦး ဆောင်သောတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းခဲ့သည် 5Rights လူငယ်ကော်မရှင်၏နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာကိုစကော့တလန်အစိုးရသို့မေလ ၂၀၁၇.
20 အောက်တိုဘာလ 2016 ။ Mary Sharpe နှင့် Darryl Mead တို့ကို Symposium တွင်ဖိတ်ကြားခဲ့သည် 'ကလေးသူငယ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအွန်လိုင်း - ဂိမ်းကိုရှေ့ဆက်နေခြင်း' Portcullis အိမ်, Westminster မှာ။ ဒီအခမ်းအနားကိုဗြိတိန်ပါလီမန်မှမိသားစု၊ Lords နှင့် Commons မိသားစုနှင့်ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးဥပဒေကြမ်းအားဗြိတိန်ပါလီမန်မှကူးယူရာတွင်ကူညီပေးခဲ့သည်။ စာတမ်းဖတ်ပွဲအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီရင်ခံစာရရှိနိုင်ပါသည် ဒီမှာ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့သည်ယဉ်ကျေးမှု၊ မီဒီယာနှင့်အားကစားဌာနမှဖွင့်လှစ်သောဘီလ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အွန်လိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
9 မတ်လ 2016 ။ Reward ဖောင်ဒေးရှင်းမှသြစတြေးလျအထက်လွှတ်တော်မှစာဖြင့်ရေးသားထားသောသက်သေအထောက်အထားများတောင်းခံမှုကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည် “ အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်သြစတြေးလျကလေးငယ်များအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်”။ ဤသည်ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် 284 အဖြစ်အနည်းငယ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောပုံစံဖြစ်ပြီး, အထဲသို့ဝင်ခြင်းဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် သြစတြေးလျပါလီမန် website က။